Onye na-emepụta Sodium Hyaluronate, ụlọ ọrụ Hyaluronic Acid, onye na-emepụta hyaluronan - AWA
Honor Ma Qualifications
Okwu Mmeghe nke Azụmaahịa
Ahịa Anyị Bụ Isi
G ISN IS B S HYALURONate SODIUM
Sodium hyaluronate bụ nnu nke a na-enweta na hyaluronic acid, yana ịdị arọ molekul sitere na 3000Da ruo 2500KDa na CAS no. 9067-32-7. Ọ bụ mucopolysaccharide polymer nke N-acetylglucosamine na nkeji D-glucuronic acid disaccharide jikọrọ. Ọ bụ ihe dị na anụ ahụ, anya, nkwonkwo ya na akụkụ ahụ ndị ọzọ na uru ahụ. Achọpụtala na syaum hyaluronate nwere ọtụtụ ọrụ physiological, dịka isonye na nsị anụ ahụ, lubrication, ọgwụgwọ ọnya, idozi anụ ahụ, imeghari ahụ, mmeghachi omume mbufụt, mmepe nke ẹmbrayo, na wdg.
A na-ejikarị sodium hyaluronate na ngwaahịa nri, ntecha, na ọgwụ. Ekwenyela na nchekwa ya, na eleghi anya kpatara mmeghachi omume anaphylactic n'ihi na ekesaara ya na ahụ mmadụ. E nwere ụzọ abụọ iji mepụta sodium hyaluronate, mmịpụta sitere na ọkụkọ ọkụkọ, na gbaa ụka dị ndụ. Anyị na-eji gbaa ụka dị omimi, na-abụghị GMO, enweghị isi anụmanụ.
> SOSMETIC GRADE sodium hyaluronate
Sodium hyaluronate bụ akụkụ bụ isi nke akụrụngwa njikọ dịka ihe intercellular nke mmadụ, ahụ nke vitreous, na mmiri synovial. Ọ nwere ọtụtụ ọrụ physiological. Mgbe ọ dara, ọrịa na-abịa. Ya mere, ndị mmadụ na-eji ya agwọ ọrịa ophthalmic na ọrịa nkwonkwo, wrinkles dị mma, gwọọ ọnya, wdg.
> Sodium hyaluronate nri nri
A na-ekesa sodium hyaluronate na ahụ mmadụ, nke na-ebelata ka oge na-aga. Egosiputara na ndi mmadu nwere ike nweta sodium hyaluronate site na iri nri. Ọ na-aghọwanye ihe na-ewu ewu na ndị mmadụ nwere nri na-edozi ahụ iji mee ka ahụike dịkwuo mma. Ọ na-abịakarị na vitamin, chondroitin sulfate, wdg.
Oligo sodium hyaluronate bụ ngwaahịa ọhụrụ nke teknụzụ na-emebi emebi bio-enzymatic mepụtara. Akpukpo aru ya bu 3,000Da-10,000Da, nke aru mmadu kariri nke oma ma nwekwa iru uto.
Sodium hyaluronate nwere ike melite bioavailability nke ọgwụ ọjọọ site na oke anụ ahụ ya, ọdịdị akpụkpọ ahụ, yana ọgwụ. Abamuru ya abughi ihe ndi ozo eji eme ihe. Enwere ike gbanwee ya site na njikọta na ịmaliteghachi iji mee ka oge njigide dịkwuo ogologo ma nwekwuo mmụba nke ọgwụ ahụ.
Na Paris ịchọ mma 2019
AKWUDIRI IGBO 2020.8
BEACH TEAM-BURUTA 2020.7
SHANDONG AWA BIOPHARM CO., LTD. E hiwere ya na July 15, 2010. companylọ ọrụ a nwere ọnụọgụ ego ruru ihe dịka nde yuan 100, yana ndị ọrụ karịrị 100. Ike kwa afọ dị ihe dị ka 130MTs ugbu a, gụnyere 100MT nke ịchọ mma na ọkwa nri HA, 20MT nke oligo HA, 10MT nke anya dara ọkwa ọkwa HA na 3MT nke ntụtụ ọkwa HA. Site na teknụzụ mmepụta dị elu, ogo ngwaahịa dị elu, yana ọmarịcha ọrụ azụmaahịa, anyị na-emeri ezigbo aha na ntụkwasị obi n'aka ndị ahịa.
Mgbe nnukwu afọ iri atọ gachara, anyị edepụtala aha na New atọ Board (Koodu ngwaahịa: 832607) wee nweta asambodo na iru eru dị ka ISO9001, DMF, NSF, KOSHER, HALAL, ECOCERT, COSMOS, Akwụkwọ ikike ị Dụ ọgwụ ike, Asambodo akwụkwọ ikike dị elu. Enterprise tech, wdg. Anyị na-eto ma na-eto. Okwu siri ike, ọdịnihu ga-abịa.
videoslọ vidiyo nke
NO.488 Huanghe12 Road, Binzhou obodo, ShandongProvince, China
Nri ọkwa HA
Ngosiputa mmado HA
Anya dara ọkwa HA
Bidoghachi mmepụta 2020.8
Teamlọ otu egwuregwu Beach - 2020.7
Asambodo emelitere (2020/6/23)
COA Idegharị Statement
Nkwupụta Mgbanwe LOGO
Oligo sodium hyaluronate , Anya tụlee ọkwa sodium hyaluronate, Ọgwụ na ọkwa sodium hyaluronate